Maxaa ku soo kordhay xaaladda Galmudug? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa ku soo kordhay xaaladda Galmudug?
Cadaadiskii ugu xoogganaa ayuu wajahayaa, Madaxweynaha Galmudug, kadib, markii hirar iyo mowjadu siyaasadeed ku dhufteen maamulka, xilli lagu jiro waqti doorasho.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Maamul goboleedka Galmudug, ayaa wajahaya xaalad hubanti la’aan siyaasadeed ah, kadib soo laba kacleynta koox diimeedka Ahlu-sunna, (ASWJ) gadoodka Ciidanka, kacdoonka dariiqooyinka iyo is-casilaaddii Wasiirka Amniga, Axmed Macalin Fiqi.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kariye, (Qoorqoor), ayaa xalay isugu yeeray Golihiisa Wasiirrada, muddu dheer kadib, markii uu soo if-bixay war sheegaya in ku dhawaad 10 Wasiir shaqada banneyn doonaan, si wadajir ahna shir jaraa’id ugu qaaban doonaan xarunta Maamulka ee Dhuusamareeb.
Qoorqoor oo taas ka hor tagaya, ayaa xalay Madaxtooyada kulan kula qaatay inta badan Wasiirrada, waxaana kulankaas diiradda lagu saaray qodobbo ay ka mid ahaayeen, xaaladda guud ee amniga Galmudug, arrimaha doorashooyinka, iyo tabashada ay dhanka Madaxweynaha ka tirsanayaan Wasiirradu.
Sida ay Keydmedia Online, u sheegeen, ilo xog ogaal ah, oo aad ugu dhaw Madaxtooyada DGG, Madaxweynaha ayaa ka garaabay cabshada ku aaddan inuu noqday kaligiis go’aan gaare aan cidna waxba weydiin.
Doodda ugu adag ee dhex martay Qoorqoor, iyo Golaha Wasiirrada Galmudug, ayaa aheyd, sida loo wajahayo, ASWJ, oo Jimcihii hore la wareegtay degaanno ay ka mid tahay magaalada Quriceel.
Waxaa si weyn kulanka ugu xoogganaa soo jeedinta ah in in laga baaqsado dagaal iyo dhiig daadin, lana maro jidka wada-hadalka, taas oo sababtay in Kooxda uu hoggaamiyo Sheekh Shaakir, loogu baaqo in ay damacooda ay ku doonaan si nabad ah.
Kulankaas, waxaa ka soo baxay Saddex qodob sida lagu sheegay war ay soo saartay Madaxtooyada;
Golahu wuxuu go’aamiyay in la dardargeliyo Suggida Amniga iyo xasiloonida Galmudug.
Golahu wuxuu ugu baaqay kooxaha ku howlan falalka amni daro inay ka waantoobaan, damacoodana ay ku doonaan si nabad ah.
Golahu wuxuu soo saaray in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka ayadoo loo gudbiyay dhinacyada ay khuseyso in ay gutaan waajibaadkooda.
Dhanka kale, gadood ciidan ayaa laga soo sheegay Gobolka Mudug, saacado kadib markii uu shaqada ka tagay, Wasiirka Amniga Axmed Macalin Fiqi, oo sabab u ahaa dhismaha ciidanka Dharaawiishta Galmudug, kuwaas oo xalay dhaq-dhaqaaqyo ciidan ka sameeyay Gaalkacyo.
Qoorqoor, ayaa u muuqda inuu wajahayo labo daran mid dooro, inuu ka tanaasulo duullaanka uu ku yahay Guriceel, dhageystana talada Wasiirrada iyo inuu qaado weerar aan natiijadiisa la hubin, isla-markaana ay is-casilaan Wasiirrada ugu muhiimsan Xukuumaddiisa.